fahalalana teknika - Vaovao - Shenzhen VisionVision Technology Co. LTD - Page 1
Home > News > fahalalana teknika
Inona no vokatry ny fametrahana drive-state solid SSD ao anaty solosaina iray manontolo?
Matetika, raha mividy solosaina iray manontolo ianao, raha tsy avo ny fepetra takiana dia misafidy solosaina iray manontolo ny ankamaroan'ny olona miaraka amin'ny vidiny antonony sy ny fikirana tsara. Na izany aza,
Mampianara anao hahalala ny maodelin'ny CPU solosaina, ity no tianao ho fantatra!
Raha miresaka CPU aho, mino aho fa tsy mahazatra ny olona rehetra, fa ho an'ny CPU solosaina, mety ho fantatrao ihany koa ny Intel (Intel) i3 / i5 / i7, ary ny andian-dahatsoratra AMD, fa mila manontany ianao hoe karazana CPU inona,
Ireo solosaina avo lenta sy avo lenta ireo dia mamela anao hanamboatra biraon'ny feo sy horonan-tsary mora foana!
Amin'ny fiainantsika andavanandro dia tsy mahazatra antsika ny solosaina. Na solosaina nentin-drazana nentim-paharazana na solosaina misaraka amin'ny birao lehibe,
Ahoana ny fomba hisafidianana solosaina rehetra-in-iray Inona avy ireo tombony azo amin'ny solosaina rehetra-ao-iray _ã € Alao sary an-tsaina ny haitao fahitanaã € '
Amin'izao fotoana izao, solosaina iray manontolo dia karazana vokatra an-tsena vaovao eo anelanelan'ny birao sy kahie.
Fakafakao ny olan'ny fanaparitahana hafanana an'ny solosaina rehetra
Raha miresaka ny fanaparitahana ny hafanana dia maro ny olona mieritreritra fa arakaraky ny habetsahan'ny mpankafy no mampitombo ny heriny ary arakaraky ny halehiben'ny hafainganana no mampisy ny vokan'ny fanaparitahana ny hafanana.